Fasaxa jirada: Xirfadaha xorta ah waxay ka faa'iideysan doonaan gunnooyinka maalinlaha ah
Posted by Tranquillus | Apr 9, 2021 | Shabakada
Waa kacaan yar oo in ka yar 1,3 milyan oo xirfadlayaal xor ah ay qibrad u leeyihiin inay la kulmaan. Sharciga maalgelinta Lambarka Bulshada ee sanadka 2021 wuxuu dejinayaa sameynta hal kheyraad maalinle ah oo qasab ah haddii ay dhacdo fasax jirro oo loo geysanayo dhammaan xirfadleyda deeqsi ee ku xiran Sanduuqa Caymiska Qaranka. Nidaamkani wuxuu dhaqan gelayaa laga bilaabo 1da Luulyo. Haddii mabaadi'da ugu muhiimsan la ogaa, qaababka wax ku oolka ah ayaa hadda la soo saaray.
Maxaa loo abuurayaa qorshe gunno maalmeed caadi ah?
Maanta, nidaamka ilaalinta bulshada ee xirfadleyda xorta ah marka la eego gunnooyinka maalinlaha ah ma ahan kuwo isku mid ah xirfadaha. Tobanka hawlgab iyo lacagaha deeqda ah ee wadajirka ah xirfadaha deeqsi ah (marka laga reebo qareenada), afar kaliya ayaa bixiya bixinta gunnooyinka maalinlaha ah haddii ay dhacdo fasax jirro. Kuwani waa kuwa dhakhaatiirta, kaaliyeyaasha caafimaadka, xisaabiyeyaasha, dhakhaatiirta ilkaha iyo umulisooyinka. Laakiin magdhowgu ma bilaabmayo ilaa maalinta 91aad ee fasaxa jirada! Marka la barbardhigo, waa seddex maalmood oo kaliya shaqaalaha qaybta gaarka loo leeyahay ama kuwa iskood u shaqeysta. Natiijo, halka ganacsatada iyo farsamayaqaannadu ay ka faa'iideystaan ​​gunnooyinka maalinlaha ah haddii ay dhacdo fasax jirro, jirro ama
Fasaxa jirada: Xirfadaha xorta ah waxay ka faa'iideysan doonaan gunnooyinka maalinlaha ah July 8th, 2021Tranquillus
READ Maxay tahay sababta loo adeegsado Office 365?
horeShaqo ka eryida shaqaalaha fasaxa jirada: qoritaan lama huraan ah laakiin intee in le'eg gudahood ah?
socdaIlaalinta fiidiyowga: ma u isticmaali kartaa caddeyn ahaan?
CÉP - Talo ku saabsan horumarka xirfadeed
Ku noqo shaqada fasax dheer oo xanuun ah ka dib
Baadh PowerPoint khadka tooska ah
Tallaalka shaqaalaha: helitaanka wuxuu ku kooban yahay dadka da'doodu u dhexeyso 55 ilaa 64 jir oo ay ka mid yihiin cudurro la wadaago